I-din yesitimela se-elektroniki imitha yamandla ombane abavelisi-China bathengisa umbane ngombane beemitha zombane, Factory
Imitha yombane yesigaba esinye samandla ombane (esebenzayo) yinto entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yombane yesigaba esinye samandla ombane (kude) yinto entsha yokulinganisa amandla ombane ophuhliswe kwaye yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008.Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neenkqubo zokuvelisa ze-SMT, ngemisebenzi enjengomlinganiso wamandla ombane, ukulungiswa kwedatha, ukubeka esweni okwenyani kunye nokunxibelelana kolwazi.
Isigaba esinye se-DIN Rail Energy Meter card ikhadi le-IC)
Imitha yombane yesigaba esinye samandla ombane (ikhadi le-IC) yinto entsha yokulinganisa amandla ombane ophuhliswe kwaye yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008.Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neenkqubo zokuvelisa ze-SMT. , kunye nemisebenzi efana nomgangatho wamandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga okwenyani kunye nokunxibelelana ngolwazi.
Isigaba esinye se-DIN Rail Energy Meter （dormitory）
Imitha yombane yesigaba esinye samandla ombane (indawo yokuhlala) yinto entsha yokulinganisa amandla ombane ophuhliswe kwaye yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008.Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neenkqubo zokuvelisa ze-SMT, ngemisebenzi enjengomlinganiso wamandla ombane, ukulungiswa kwedatha, ukubeka esweni okwenyani kunye nokunxibelelana kolwazi.
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (kude)
Inqanaba lesithathu le-4 ye-eneji yamandla ombane (kude) yimveliso yokulinganisa amandla amatsha eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008 kunye ne-GB / T17215.323-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.